Shuruudaha Caymiska Caafimaadka - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Ogolaansho hore > Shuruudaha Caymiska Caafimaadka
Waxaan u adeegsanaa dhowr ilo si aan u go'aamino in faragalinta gaarka ahi ay caafimaad ahaan lagama maarmaan tahay.
Waxaan u adeegsanaa dhowr ilo si aan u go'aamino in faragalinta gaarka ahi ay caafimaad ahaan lagama maarmaan tahay. Kiis kasta waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo la adeegsanayo shuruudo ku habboon, sidoo kale iyada oo la tixgelinayo macluumaadka kiisaska shaqsiyeed.
Waxaan ku tiirsannahay tilmaamaha MCG ee qaran ahaan loo aqoonsan yahay inay yihiin isha koowaad ee talooyinka ku saleysan caddeynta ee ku saabsan daboolista bukaan socodka. Intaa waxaa dheer, waxaan u abuurnay Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (CCCs) xaaladaha aan looga hadlin Tilmaamaha MCG. Go'aannada daruuriga ah ee caafimaadka dabeecadda ah waxaan u adeegsanaa heerarka Nidaamka Adeegsiga Daryeelka Daryeelka ee Adeegyada Maskaxda iyo Maandooriyaha (LOCUS), shuruudaha MCG, iyo Shuruudaha Isticmaalka Maandooriyaha Bulshada Mareykanka (ASAM) ee dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha.
Xubnaha Medicare, CHPW waxay u adeegsataa Xarumaha Adeegyada Medicare iyo Adeegyada Medicare (CMS) go'aaminta caymiska qaranka (NCDs) iyo go'aaminta caymiska maxalliga ah (LCDs), haddii la heli karo. NCDs iyo LCDs waxaa laga heli karaa Noridian, Qandaraaslaha Adeegga ee Medicare ee Washington, ama waxaa laga heli karaa websaydhka CMS. Haddii shuruudaha CMS-ka aan la heli karin, markaa Tilmaamaha MCG iyo / ama CCC-yada CHPW ayaa la adeegsadaa.
Agaasimayaashayada caafimaad waxay tixgelin siinayaan da'da isqorista, xaalada bulshada, xanuunada laxiriira, iyo helitaanka adeegyada bulshada dhexdeeda markay sameynayaan go'aamada dib u eegista isticmaalka. Tilmaamahan waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Xariirka Maaraynta Daryeelka.
Shuruudaha Caymiska Caafimaadka (hoos ka eeg liiska la beddeli karo)
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Ogast 6, 2020